Labyrinth of Horta | Wararka Safarka
Maria | | Barcelona, Magaalooyinka Spain
Sawir | Canaan Wikimedia Commons
Barcelona caan kuma aha oo kaliya dhismayaasha qaab dhismeedka casriga ah, xeebaheeda raaxada leh iyo dalabkeeda dhaqameed ee weyn, laakiin sidoo kale meelaha cagaaran ee u fidiya dadka deegaanka iyo martida meel ay kula xiriiraan dabeecada kana fogaadaan buuqa iyo buuqa. magaalada.
Beerta Ciutadella, Güell Park, Cervantes Park, Joan Brossa Gardens waa tusaalayaal laakiin, Ma ogtahay in beerta ugu faca weyn ee lagu keydiyey Barcelona ay tahay Horta Labyrinth? Ha moogaanin qoraalkan halka aan ka ogaanno dhammaan sirtiisa. Sii wad akhriska!
1 Taariikhda Labyrinth ee Horta
2 Muxuu yahay Horta Labyrinth?
3 Dabeecadda Labyrinth ee Horta
4 Macluumaadka xiisaha leh
4.1 Sidee loo tagaa Horta Labyrinth?
4.2 Waa maxay saacadaha booqashada?
4.3 Waa maxay qiimaha gelitaanka?
Taariikhda Labyrinth ee Horta
Waxay ku yaalliin buurta Collserola, Horta Labyrinth waxaa loogu talagalay 1791 iyadoo la doonayo rabitaan deg deg ah Joan Antoni Desvalls, Marquis of Llupià, El Poal iyo Alfarràs, dhul ay leeyihiin qoyskan sharafta leh. Wuxuu jecel yahay farshaxanka iyo dabeecadda, wuxuu rabay inuu abuuro beer neoclassical ah iyadoo la kaashanayo nashqadeeyaha Domenico Bagutti iyo ninkii beerta ka shaqaynayay ahaa Joseph Delvalet oo lagu dhiirrigeliyey khuraafaadkii Theus: qof kasta oo ku guuleystey inuu gaaro xarunta wuxuu jacayl ahaan u heli lahaa abaal marin.
Tan awgeed, beer ayaa loo sameeyay labyrinth oo ah geedo beroosh ah, farshaxanno iyo masraxyo matalaya jilayaasha ka soo jeeda quraafaadka Greco-Roman-ka oo astaan ​​u ah heerarka kala duwan ee jacaylka.
Badhtamihii qarnigii XNUMX-aad, Joaquín Desvalls y Sarriera, VIII Marqués de Llupiá, wuxuu u xilsaaray ballaarinta beerta aagga torrente d'en Pallós ilaa naqshadeeyaha Elías Rogent, oo naqshadeeyay beer jacayl leh oo leh laba jibbaaran , gogosha ubaxa, biyo-dhaca iyo geedaha waaweyn. Intaas waxaa sii dheer, beerta neoclassical-ka wuxuu ku daray marin biyo ah oo udhaxeeya dabaqa sare iyo kan dhexe. Dhamaadkii qarnigii XNUMXaad, Horta Labyrinth waxay noqotay meel ay ka socdaan dhaqdhaqaaq bulsheed oo xoog badan.
Sanadkii 1968 qoyskii reer Desvalls ayaa siiyay golaha magaalada, ka dib markay qabteen howlo badan oo dib u soo celin ah waxay u fureen dadweynaha sanadkii 1971. Soo qulqulka xad dhaafka ah ee soo booqdayaashii sanadihii 70meeyadii waxay sababeen xaalufinta qaar ka mid ah walxaha iyo dhirta la isku qurxiyo, waana sababta dib loogu habaynayo iyo waxaa dib loogu furay iyadoo ay xaddidan tahay awoodda 750 qof markiiba, si looga badbaado burburinteeda tartiib tartiib ah.
Muxuu yahay Horta Labyrinth?
Horta Labyrinth magaceeda waxaa ku leh labyrinth-ka geedaha berooshka oo ku fadhiya dhul baaxaddiisu dhan tahay 9 hektar. Beertan waxaa loo qaybin karaa laba qaybood oo kala duwan:
Beerta Neoclassical: Waxaa loo qaybiyaa seddex meelood wuxuuna ka koobanyahay dulucda jaceylka: heerarka hoose, heerka sare iyo labyrinth iyo Belvedere-keeda. Halkan waxaad ku booqan kartaa barkadaha, ilo biyo ah, taambuugyo, tirooyin quraafaad ah, boholo macmal ah, tillaabooyin la taaban karo, iwm.
Beerta Jacaylka: ka soo horjeedka kii hore, dulucda ugu weyn ee beertaan waa dhimashada sida laga soo xigtay dareenka naxdinta leh ee dhaqdhaqaaqa faneed ee qarnigii XNUMXaad. Waa beer jilicsan oo shadier leh nidaam aan caadi ahayn oo geedo ah sida yew, geed, mooska iyo geedaha lime, oo lagu daboolay ivy iyo ubax jacayl iyo xitaa qabuuro been ah oo ay yartahay kuwa maanta haray si loogu daro sawirkaas mugdiga ah.
Daarta qasriga: oo ku ag yaal albaabka laga galo Labyrinth of Horta waa dhismahan oo jidhkiisu ugu weyn yahay laga bilaabo dhammaadka qarnigii XNUMX-aad, in kasta oo ay hayaan walxaha sida munaaraddii difaaca ee qarnigii XNUMX-aad. Aagga ka dambeeya qasriga waxaa ku yaal Jardin de los Boxjes, oo lagu qurxiyay muuqaallo sheeko-dhaqameedyo qadiimi ah oo lagu garto sariiraheeda geedaha looxaanta ku xardhan.
Xadiiqadda Horta Labyrinth waa goob aad loo soo sawiray muuqaalkeeda iyo kala duwanaanshaheeda. Meelaha ugu quruxda badan waxaa ka mid ah:
Jaranjarada Belvedere: waa marinka sheybaarka laga soo bilaabo heerka sare ee beerta neoclassical.
Labyrinth: muuqaalka dusha sare ee baalasha sare waa mid ka mid ah meelaha ugu booqashada badan. Taallo loo qoondeeyey ilaaha Eros ayaa taagan bartamaha labyrinth.
The Danae iyo Ariadna muraayadaha: Iyada oo labyrinth ay tahay asal ahaan, dhismayaashaani waa kuwo aad u xeel dheer, sidaa darteed dhammaadkii qarnigii XNUMXaad waxaa loo adeegsaday masrax loogu talagalay bandhigyada hawada furan.
Jardín de los Bojes: gaar ahaan wadada dhexe ee leh qasriga asalka ah.
Balli iyo teendhada Carlos IV: ee qaabka neoclassical Talyaani.
Beerta Moses: dhexdeeda waxaa ku yaal bohol leh il u eg qaabka minotaur madaxa.
Barxadda gaarka loo leeyahay ee ku taal afaafka hore ee qasriga Desvalls.
Barkadda Beerta Ubax: oo lagu sharraxay laba faallooyin oo ay ku jiraan astaamaha badda iyo madaxa triton.
Kanaalka Jacaylka: saddex mitir oo qoto dheer bilowgiisii ​​waa la raaci karaa.
Isha Ahraamta: oo isha biyaheeda ay ku taal madaxa libaaxa soo roga.
Albaabka Shiinaha: wuxuu ku ag yaal Beerta Jacaylka.
Dabeecadda Labyrinth ee Horta
Asal ahaan, shaqada Labyrinth of Horta ayaa lagu muujiyey, si kale haddii loo dhigo, ujeedadeedu waxay ahayd in dabeecadda loo dhawaado kuwa ka fikiraya si wax ku ool ah. Tani waa sababta ay u jiraan kala duwanaanshaha bayoolojiga ee baarkarkan ku yaal Barcelona.
Holm oak, carob, geed, myrtle, geed cad, magnolia, Canary geed, geedo timireed, linden, casaan, beroosh, muus, qori qudhac ah, fardaha laabta, sanduuqa, yew, laurel, ash, fern ...
Xagga xayawaanka, Horta Labyrinth waxay hoy u tahay xayawaannada caadiga u ah Sierra de Collserola sida hiddo-wadaha, dabagalka casaanka, jiirarka, fiidmeerta, digaagga duurjoogta, raha caadiga ah, calaamadaha iyo noocyada qaar ka mid ah masaska. Marka laga hadlayo shimbiraha, baarkani wuxuu hoy u yahay: shimbirro, magpies, qoolleyo xamaamyo tucas, wagtail cad, dharka yurubiyanka, qoolleyda qoryaha iyo buluugga, iyo noocyada kale.
Macluumaadka xiisaha leh
Sidee loo tagaa Horta Labyrinth?
Haddii aad tagto metro, saldhigga ay tahay inaad ka degto waa saldhigga Mundet (khadka 3).
Haddii aad rabto inaad raacdo bas, raac khadadka 27, 60, 76, H4 iyo B19.
Waa maxay saacadaha booqashada?
Horta Labyrinth wuxuu furan yahay maalin kasta xilliga qaboobaha 10 subaxnimo ilaa 18 galabnimo iyo xagaaga 10 subaxnimo ilaa 20 galabnimo.
Waa maxay qiimaha gelitaanka?
Gelitaanka guud wuxuu leeyahay qiimo dhan 2,23 euro halka midka la dhimay uu yahay 1,42 euro. Arbaco iyo Axad waa bilaash.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka Safarka » Magaalooyinka Spain » Horta Labyrinth
Maxaa lagu arkaa Montevideo